Ukurhola iBlog: IHamelife | Martech Zone
UkuThimba iBlog: IHamelife
NgeCawa, ngoJulayi 8, 2007 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ubomi beHamelife Ibhlog enikezelwe kubazali abafuna ukwahluka. Ukuba ngumzali yinto esondeleyo kwaye endiyithandayo. Ndinonyana omnye oqala e-IUPUI oku kuwa kunye nentombi kwisikolo esiphakathi.
Bendingutata omncinci kwaye mhlawumbi ndenza zonke iimpazamo umzali anokuzenza. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba ngandlela thile kummangaliso wobomi, uThixo uyabavumela abazali ukuba benze nayiphi na impazamo kwaye babe nabantwana abalungileyo- ukuba nje sibathanda ngeentliziyo zethu zonke kwaye zibeke phambili kunezethu!
Ndiza kuhlawula ngakumbi yobomi kwaye udlulise iimpazamo endizenzileyo ukuze abanye bangazukuya kwiintloni!
Ukuphunyezwa kwakho Umxholo osikiweyo kumnandi. Ingumxholo omangalisayo onobume obuhle obulungiselelwe kunye nokwakhelwa ukusetyenziswa okukhulu. Ndithanda kakhulu indlela oyisebenzise ngayo i-CSS yelogo yakho kunye nelayini, kodwa ugcine umxholo weeNjini zokuKhangela ukuba uzifunde. Wenze kakuhle! Ingcebiso yokuqala yeyokuba ungeze i- Sitemap, nangona! Lo ngumgaqo weenjini zokukhangela ukuhamba ngokulula kumxholo wesiza sakho ngaphandle kokuba bazibonele ngokwabo.
Iplagi yam endiyithandayo yemephu yinguqulelo engu-3.0b7 ye Iplagi yeGoogle yemephu yesayithi. Ndiyilungiselele ngokobuqu ukuba ndingenise kuYahoo! kwaye wathumela ikhowudi kumbhali kodwa akayakhelanga kupapasho olulandelayo. Ndiyathemba ukuba uyakuyifaka.
Nje ukuba ufumane imephu yendawo yakho, into elandelayo kukuhlaziya ifayile yakho yeerobhothi.txt kunye nendawo ebekwe kwimephu yesayithi. Olu longezo lwakutshanje kwinkcazo yemephu, kodwa kungcono ukuzisebenzisa ngoku kunokuba kamva! Nantsi indlela ekufuneka ijongeka ngayo:
Umenzeli-arhente: * Ungavumeli: / wp- Imephu yesayithi: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
URory ucele ngokukodwa ukuba ndichukumise ukuba ingaba ibhlogi yebhlog kufuneka ibe yeyayo okanye ibayinxalenye yobomi bobomi. Ndiza kuthatha indlela ephosakeleyo kwaye ndicinga ukuba, ekugqibeleni, kukuwe. Nangona kunjalo, ndiyakwazi ukuqonda ukuba abantu bayaphawula ngaloo nto-kuba izihloko ezibini zihluke kakhulu.
Ingcinga nje, kodwa ngaba ikhona indlela yokwenza iphepha lokuba ngumzali kunye nephepha leBlogging abantu abanokuya ngqo kulo kunye neefidi ezimbini, enye nganye? Ndicinga ukuba oku kunokufezekiswa ngokusebenzisa iplagi yokuThengwa njenge Igorha lokugqibela leTag kunye nokumakisha iposti nganye ngo "mzali" okanye "ukubhloga". Ingathatha umsebenzi othile, kodwa iya kuba intle ngokwenene!
Ndabona kwakhona xa ndivavanya i-URl, njenge http://www.hamelife.com/parenting iphepha eliqhelekileyo elingu-404 liza. Phuma Iposi lam ekwenzeni ngokwezifiso iphepha le-404 -Kuphantse kufana nokwenza i-injini yokukhangela kwindawo yakho.
Ubomi beHamelife yindawo ebukhali ene Umxholo ongenaxabiso. URory unamaqhinga ambalwa kunyusa umkhono wakhe. Jonga i-hamelife menyu phezulu phezulu… eyahlukileyo kakhulu (kwaye imnandi!). Enkosi ngokundixelela ibhlog yakho, Rory.
UkuThimba iBlog: Lendo.org
Inkcazo yomsebenzi kwiVP yokuThengisa
Jul 8, 2007 ngo-4: 01 PM
Enkosi ngokundixelela ibhlog yakho, Rory.
Uyadlala, Doug? Ndiyabulela kakhulu kuwe ngokulahla iliso eliluncedo kule ndawo. Ndidinga lonke ingcebiso endinokuyifumana, kwaye ndiyazixabisa kakhulu izikhombisi osinike zona.
Okokuqala, ndibethwa ngumoya wakho wokuncoma. Enkosi kakhulu - bayakhuthaza kakhulu.
Ngoku, ndiyazibuza ukuba ungandinceda na ngeengcebiso zakho ezizezinye:
Inqaku # 1 -I-M yobomi bobuhlobo ithatha undwendwe kwindawo yemephu. Ndisebenzise indlela Imephu eyenzelwe iSline. Ngaba oku ndikulungiselele ngokuchanekileyo? Okanye ngaba kufuneka ndihambele ngqo kwiNqaku # 2 kwaye ndiqwalasele iirobhothi zam.txt ngokuchanekileyo?
Iirobhothi.txt yam ifundeka ngolu hlobo:
Ungavumeli: / wp-umxholo /
Ungavumeli: / wp-admin /
Ungavumeli: / wp-kubandakanya /
Ungavumeli: / wp-
Ungavumeli: / feed /
Ungavumeli: / ukulandelela
Ungavumeli: / cgi-bin /
kwaye ndiyifumene kwihamelife.com/wpblog/robots.txt. Into ebonakala ingalunganga ngale nto- ndiziva ngathi ibekwe kwenye indawo, kodwa andiqinisekanga ukuba ungayenza njani. Ndingasebenzisa uncedo.
Ukuseta kwam kukuba nebhlog kwihamelife.com/wpblog, ke andinayo kulawulo lweengcambu. Uyayibona indlela endidide ngayo le nto!
Inqaku # 3 - Enkosi ngengcebiso yakho, kuya kufuneka ndicinge ngakumbi ngayo. Ndoyame ngakumbi malunga nebhlog yesibini. Ndiyazi ukuba kuthetha ukugcina umxholo omninzi, kodwa ndifunda ukubuyela umva malunga nale nto yokubhloga- ungabi noxinzelelo.
Inqaku # 4 -Ndijonge kwiWordPress yakho 404 inqaku njengoko sithetha. Ingcebiso elungileyo kwaye ndiza kuyiphumeza ngokukhawuleza.
Enkosi kwakhona, uDoug. Uncedo lwakho luxatyiswa kakhulu.
Jul 8, 2007 ngo-4: 41 PM
Ndingacebisa ukubeka ifayile yakho yeerobhothi.txt kulawulo lwakho lweengcambu. Unokufumana into encinci, nangona kunjalo, kwaye ubeke enye indawo endaweni yengcambu .htaccess ifayile.
Phinda uthumele iirobhothi.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt
Ndisaya kufaka imephu yendawo yeXML endaweni yayo kunye nokusebenzisa iplagi endiyichazileyo kwi1. Imephu yesayithi yeXML ihambelana nomgangatho weSitemap. Le mepu iyakwakha kwakhona ngeposi kwaye izenzele ngokuzenzekelayo iinjini zokukhangela. Kulunge kakhulu.
Ukuba ufaka imephu yesayithi kwaye ikwisikhombisi se-wpblog, unokubeka kwakhona kuyo:
Phinda uthumele imephu yesayithi.xml http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml
Sebenzisa isilumkiso kunye nokugcina ifayile yakho ye-htaccess (inokufihlwa ukuze uqiniseke ukuba ujonga iifayile ezifihliweyo kunye nesoftware ye-FTP) ukuba unokuyiphosa!
Emva koko qiniseka ukongeza umgca wemephu kwifayile yakho yeerobhothi.txt. Ukuba unomgca wokuqondisa kwakhona kwifayile yakho ye-htaccess, unokusebenzisa nokuba yeyiphi i-URI… ndingangagqibeki koko koko,
Jul 8, 2007 ngo-4: 19 PM
Ndiphumeze nje i-404.php yakho, iDoug.
Zama oku: imvelaphi.com
Ngoku, oko iphepha elingcono elingu-404!